Articles tagged 'nyasango'
Nyasango fails to finish in London 7 August 2017 HARARE - Zimbabwe's long-distance star Cuthbert Nyasango failed to cope with the burden of expectation as he came unstuck in the men's marathon at the World Athletics Championships in London yesterday. Nyasango, who was making his second consecutive appearance at the IAAF World Championships, ...
Nyahora upbeat at World Champs 5 August 2017 HARARE - Zimbabwe marathon runner Rutendo Nyahora is under no illusion at the weight of expectation as she makes her first appearance at the IAAF World Championships that began yesterday in London. Nyahora is part of a five-member Zimbabwe team of marathon runners that is in London to compete ...
Chigora, Nyasango win in OM 10km 8 May 2017 MUTARE - The second edition of the Old Mutual Dangamvura Fun Run's 10km was won by veteran campaigners Robson Chigora and Constance Nyasango in the men's and women's categories respectively. Although the number of participating athletes dropped by almost 100 from last year's 671 down to 582 th...
Hard work pays off: Nyasango 22 August 2016 HARARE - If things had gone to plan for Cuthbert Nyasango, the Rio Olympic Games might have witnessed the rivalry of a husband and wife. It would have been a rare treat to have a couple represent Zimbabwe at the quadrennial global sporting extravaganza. Cuthbert and his wife Faith have main...
Zimbabwe athletes disappoint in Beijing 23 August 2015 HARARE - Zimbabwe's long distances runners Cuthbert Nyasango, Gilbert Mutandiro and Cephas Pasipamiri failed to leave a mark at the 2015 World Championships Marathon race in Beijing, China yesterday. Nyasango was the best placed Zimbabwean when he came in at number 23 with a time of 2:22:15 at...